About	Small Business Development Center
Yaa Nahay: The SBDC Story (video)
Congress abuuray barnaamijka Center Development Small Business ee 1980 si ay u bixiyaan gargaar aadka loogu baahan yahay in ganacsiyo badan oo aan awoodin in ganacsiga gaarka ah.
SBDCs bixiyaan xirfadooda ee ku sugan iyo Hanuun in milkiile kasta oo ganacsi yar yar oo loo baahan yahay in ay barwaaqoobaan dhaqaalaha maanta ee tartan rasmi ah. The South Central Minnesota SBDC waa qayb ka mid ah network Minnesota ee xarumaha gobolka. We are funded by the U.S. Maamulka Ganacsiga yaryar iyo la-hawlgalayaasheeda taageero gobolka, taas oo noo ogolaaneysa in ay bixiyaan adeegyo xirfadeed ee lacag la'aan ah.
Waxaan bixinaa mid-ka-fool ah la talinta ganacsiga aasaasay oo bilaabi-ups. Waxaan sidoo kale kaa caawin si aad u ogaato oo ammaan ee magaalada aad u baahan tahay in ay ku shaqeeyaan oo ay ballaariso. Ugu dambeyntii, waxaan ku siin diyaariyeen ah ee tababar ugu jirin qiimaha ama kharashka ku magacaaban.
Maxaad SBDC ah? The primary causes of small business failure are baaqsan karo: undercapitalization iyo maamulka kasbay.
taliyayaal waxaa soo maray dad ganacsi, kuwaas oo intooda badan ku leedahay ganacsi iyaga u gaar ah. Way ku caawin karaan in aad soo ogaato yihiin, fahmo oo laga adkaado caqabadaha ganacsi guul iyo tartamaya suuqa dunida oo dhan.
Adeegyada SBDC — Caawimo kasta Stage
xisaabaadka / Quickbooks
Suuq horumarinta qorshaha iyo cilmi suuqa
eCommerce, warbaahinta bulshada, websites
City of Eye Sleepy
City of Springfield Blue Earth County